Tsy Eken’ny Vehivavy Amerikana Latina Ny Sarisarizoro Mandokandoka Eny An-dalana · Global Voices teny Malagasy
Tsy Eken'ny Vehivavy Amerikana Latina Ny Sarisarizoro Mandokandoka Eny An-dalana
Voadika ny 03 Avrily 2014 20:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, বাংলা, 日本語, Deutsch, Español
Efa taloha ela be no nosokajiana ho fomba fisarisarizoro mihaja ny fandokandokafana: teny na fehezanteny ambaran'ny lehilahy amin'ny vehivavy mba hisarihana sy hambaboana azy ireo. Na dia izany aza, mandeha ny adihevitra ankehitriny raha fisarisarizoro tokoa ny fandokandokafana, na sokajiana ho sotasota.
Taminà lahatsoratra tamin'ny taona 2011, hoy ny sampana fampahalalam-baovao Inter Press Service:
Misy ireo lehilahy sasany miantso izany ho fandokandokafam-behivavy, ary aseho amin'ny karazana tononkalo mihitsy aza. Saingy maro amin'ireo vehivavy no mandray izany fandokadokafana izany ho toy ny karazana sotasota na fanorisorenana izay manaraby, manala-baraka ary indraindray manaratsy azy ireo mihitsy aza.
Ahitana valiny toy izao ny fikarohana ao amin'ny Google: “fandokandokafana mahafinaritra mba hahitàna ny tena fitiavana”, “fandokandokafana 50 hambaboana ny fòn'ny vehivavy”, “fandokandokafana 107 hampamirapiratra ny tontolo andron'ny vehivavy”.
Maro ireo mpanakanto sy mpiserasera no nizara sary sy fanehoana an-tsary mba hiampanga ny sotasota an-dalambe ary mitaky fanajana hoan'ny vehivavy.
Nizara ny iray tamin'ireo asa-tanany ilay mpanao sary Shiliana, Marcelo Pérez, izay ahitana vehivavy iray maneho ny fijeriny mikasika izany atao hoe “fandokandokafana” izany izay renesiny eny an-dalana.
Fanehoana an-tsary avy amin'i Marcelo Perez, nahazoan-dalana avy aminy ny famoahana ny sary.
Amin'ny sary voalohany, hoy ilay vehivavy: “tsy fandokandokafana izany, fa vavan'olona adala tsy nahita vehivavy nandritra ny herintaona.” Amin'ny sary faharoa: hoy izy “milina manaitra ity, karazana mpibojaboja mihidy tanteraka.” Sary fahatelo, hoy ilay vehivavy: “faikan'olona mihiaka zavatra tsy manjary ity (izay sady tsy mandoka no tsy manaitra) eny an-dalambe”. Ary ny sary farany: “fijery mifikitra sy mampatahotra ataon'ny marary saina tsy manana volo-maso ity.”
Avy ao Arzantina, mpanoratra ao amin'ny Global Voices Jorge Gobbi namoaka sary tao amin'ny kaonty Flickr-ny izay ahitana fehezan-teny malaza nandritra ny fihetsiketseham-behivavy manerantany: “Tsy mila ny fandokandokafanao aho, fa mila ny fanajanao.”
Tsy mila ny fandokandokafanao aho, fa mila ny fanajanao. Avy amin'i Morrisey tao amin'ny Flickr, voaaro amin'ny zon'ny mpamorona CC license
Nandritra izany, Marta G. Terán nizara sary ahitana fehezanteny mitovy amin'izany, saingy nalaina tao amin'ny araben'i Nicaragua kosa ny sary tamin'ity indray mitoraka ity:
Tsy mila ny fandokandokafanao aho, fa mila ny fanajanao, avy amin'ilay mpisera Flickr Martascopio, voaaro amin'ny zon'ny mpamorona
Bilaogera sady mpandravaka an-tsary hafa, DevilKaty nizara ity tantara an-tsary ity ihany koa:
Fandokandokafana avy amin'ilay mpanao sary DevilKaty, nalefan'ilay mpiserasera DevilKaty tao amin'ny Flickr, zon'ny mpamorona Creative Commons license (CC BY-NC 2.0)
-Lehilahy: Gaigy avokoa ianareo rehetra ry vehivavy, fa inona no tsy hitiavanareo ny fandokandokafana.
- Eny. Marina izany, nahoana aho no mba tsy nihevitra izany aho! Ankafiziko ny sotasotaina eny an-dalambe. Mahatsiaro dokafana amin'ny fomba maharikoriko aho! Tiako raha lehilahy tsy fantatro sy tsy tiako no mijery ny nonoko satria hoe vehivavy aho. Voninahitra ny fanevatevana tahaka izany ! Tiako izany karazana fankafizana adala sy vetaveta izany!
- Lehilahy: Ekena, okay, mazava amiko.
Farany, ahitana fisantaran'andraikitra maromaro ao amin'ny Facebook mametraka ny fandokandokafana ny vehivavy miampanga ny fisarisarizoro ho toy ny karazana fandokandokafana ary manasokajy izany ho toy ny sotasota na fanorisorenana.
Estamos en contra del acoso a la mujer con los piropos callejeros [es] [Manohitra ny fanorisorenana ny vehivavy amin'ny alalan'ny fiantsoantsoana misarisarizoro izahay]
Paremos el acoso callejero (Atsaharo ny Fanorisorenana eny an-dalana)
Mujeres y hombres en contra del acoso callejero (Vehivavy sy Lehilahy Manohitra ny Fanorisorenana eny an-dalana)